> Resource> iTunes> Nyefee Non zụrụ na zụrụ faịlụ site iPod ka iTunes
Achọrọ m nyefee m music si m iPod m iTunes. M na-adịghị na-mere apple-eme ka ọ otú mgbagwoju anya !!!! Nwanne m nwaanyị nwere niile anyị songs na ya iTunes na echezọwo paswọọdụ na-apụghị-esi n'ime ihe email otú m nwere ike bụghị ikike kọmputa m! Onye ọ bụla maara ụzọ dị mfe m nwere ike mfe nyefee music gafee (na-enweghị downloads.) N'ihi.
Chefuru ndabere gị iTunes n'ọbá akwụkwọ tupu reinstalling kọmputa? Hapụ gị iTunes n'ọbá akwụkwọ ruru ka kọmputa mkpọka ma ọ bụ formatting na mberede? Ma ọ bụ, dị ka onye ọrụ n'elu, ị dị nnọọ echefu gị Apple ID na paswọọdụ, nke na-eme ị na-ada nyefee zụrụ faịlụ ka iTunes? Dabara nke ọma, ị echekwara niile data na gị iPod. Na ndị a, eleghị anya ị chọrọ nyefee faịlụ ka iTunes ugbu a. Isiokwu a ebe a na-aga na-egosi na ị na abụọ ụzọ banyere otú nyefee ịzụrụ na-abụghị ịzụrụ faịlụ site na iPod ka iTunes. Ugbu a, na-agụ na ha.
Method 1. Copy ịzụrụ na-abụghị zụrụ iPod ka iTunes (Mkpa-akwụ)
1) Olee otú nyefee iPod music ka iTunes
2) Olee otú ịkwaga fim iPod ka iTunes
3) Olee otú idetuo listi ọkpụkpọ site na iPod ka iTunes
4) Nyefee iTunes U, pọdkastị, music videos, TV egosi & audiobook
Method 2. Nyefee ịzụrụ si iPod ka iTunes (Kpamkpam free)
Uru: Nyefee niile ma ọ bụ họrọ ịzụrụ na-abụghị ịzụrụ. Cons: bụghị free.
Iji nyefee abụghị ịzụrụ nakwa dị ka zụrụ faịlụ site na iPod ka iTunes, na Wondershare TunesGo ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac) bụ ịrụ ụka adịghị ezi nhọrọ. Ọ bụ a pụrụ iPod ka iTunes transfer software, ime ka ị idetuo họrọ ma ọ bụ niile music, fim, iTunes U, pọdkastị, music video, audiobook-egosi na TV si iPod ka iTunes n'ime ole na ole clicks.
Nkwadebe: Gbaa mbọ hụ na ị na ebudatara ma wụnye nri version nke iPod ka iTunes transfer software na kọmputa. Ebe a, anyị na-agbalị Windows version nyefee faịlụ site na iPod ka iTunes. Mac ọrụ nwere ike na-yiri nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPod na kọmputa site na eriri USB
Jiri ihe Apple eriri USB jikọọ gị iPod na kọmputa. Nke a iPod ka iTunes transfer software ga chọpụta ma na-egosi gị iPod na ọdịnaya ke akpan window.
Cheta na: The Windows version arụ ọrụ nke ọma na iPod aka 3/4/5 na iOS 5, 6, 7, 8 na nke 9, iPod nano 1/2/3/4/5/6/7, iPod kpochapụwo 3/2/1 , na iPod ịkpọgharịa 1/2/3/4. Ma ihe ndị Mac version, ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na iPod aka 5/4 na-agba ọsọ iOS 9,8,7, 6 na 5. E wezụga na, na Mac version-enye gị ohere nyefee music na listi ọkpụkpọ site na iPod nano / ịkpọgharịa / kpochapụwo ka iTunes.
Nzọụkwụ 2. Copy faịlụ site na iPod ka iTunes
Gaa Media na ekpe kọlụm. Ị ga-esi dị iche iche media edemede n'elu akara. Họrọ otu udi na pịa ya na-egosi ya window.
1. Nyefee music si iPod ka iTunes
Pịa Music n'elu akara ịbanye music management window.
Pịa Smart Mbupụ na iTunes. Nke a software ga chọpụta niile songs na nyo song ẹdude ke iTunes na na idetuo ndị na iTunes na-adịghị na iTunes.
Lelee songs ị chọrọ nyefee iTunes ma ọ bụ họrọ niile, wee pịa triangle n'okpuru Mbupụ na> Mbupụ na iTunes Library. Nkọwa ndị ọzọ banyere ebufe iPod music ka iTunes >>
2. Paghaa Movies si iPod ka iTunes
Gaa Movies taabụ n'elu akara. Họrọ fim ị chọrọ ịkwaga iTunes. Mgbe ahụ, akpali iPod nkiri na iTunes selectively. Ọzọ Ama >>
3. Copy listi ọkpụkpọ site na iPod ka iTunes
Gịnị banyere transfer listi ọkpụkpọ site na iPod ka iTunes? Na ekpe kọlụm, pịa Playlist. Na nri, na-ahọrọ gị chọrọ listi ọkpụkpọ na mbupụ ha ka ha iTunes. The zuru ezu Ama banyere iPod playlist ka iTunes transfer.
4. Gbanye pọdkastị, iTunes U, audiobook, vidio egwú, na TV na-egosi
Ka ịgbanwee ndị a media faịlụ, ị dị nnọọ mkpa pịa media faịlụ n'elu akara otu otu. Ekem, ke kwekọrọ ekwekọ window, tinye akara media faịlụ na mbupụ ha ka ha iTunes.
Uru: Kpamkpam free. Nyefee niile zụrụ faịlụ. Cons: Etisa ịkwaga abụghị zụrụ faịlụ. Mkpa Apple ID. Kwesịrị ikike kọmputa.
Soro nzọụkwụ-site-nzọụkwụ-nkuzi n'okpuru:
Nzọụkwụ 1. Run iTunes na kọmputa.
Nzọụkwụ 2. Pịa Store na ndọpụta menu, pịa ikikere nke a Computer ...
Nzọụkwụ 3. Mgbe a dialog abịa si, ọsọ ọsọ na Apple ID na paswọọdụ ị na-eji ịzụta faịlụ site na iTunes. Ọ bụrụ na ị na-eji ọtụtụ Apple NJ ịzụta faịlụ, ị kwesịrị ị na ikike na kọmputa maka niile nke Apple NJ.
Nzọụkwụ 4. Jikọọ gị iPod na kọmputa
Nzọụkwụ 5. N'okpuru NGWAỌRỤ, nri pịa ma ọ bụ ịchịkwa pịa gị iPod. Na ya ndọpụta ndepụta, pịa Nyefee ịzụrụ.
Cheta na: A na kọmputa nwere ike ikike na kasị ise Apple NJ.
Otú e si edozi ya mgbe iPod Ga-mmekọrịta faịlụ na iTunes?
Otú nyefee Music si iPod ịkpọgharịa ka iPod aka
Ngwọta maka iTunes ndabere Oge Okpu
2 Ụzọ ịkọrọ gị iTunes Library
2 ụzọ na-Album osise na iTunes
Otú nyefee iTunes Library si PC ka PC
Ebee bụ iTunes Playlist ebe?